200% I-Deposit Bonus Imibandela neemeko | FXCC
I-200% I-Deposit Bonus Imibandela neemeko
ikhaya / I-200% I-Deposit Bonus Imibandela neemeko
I-FXCC 200% I-Deposit Bonus Imigomo nemeko (UKUFANELEKILEYO)
Uyavuma ukuba ngokuthatha inxaxheba kulo mnikelo ("Ukunikezela"), uya kubopha ngale miqathango kunye nemimiselo ("Imigomo") kunye nemimiselo jikelele kunye neemeko ezisebenza kwiakhawunti yakho yorhwebo. Kufuneka ufunde le Migaqo ngokucophelela uze uziqhelise kunye nathi Isaziso sokwazisa ingozi.
Abathengi abatsha nabakhoyo be-FXCC. (Abaphathi be-akhawunti eseMgangathweni okanye ye-XL) abakhethe ukungena ukuze bathathe inxaxheba kuXabiso ngokubonisa ngokucacileyo isigqibo sabo ngokungenisa isicelo nge-imeyile kwa finance@fxcc.net.
oluxhathisayo: Ubungakanani obukhulu beAkhawunti ezithatha inxaxheba kule phromoshini yi1: 100
IDistim efanelekileyo: Umsebenzi wemali ongeze iimali ezintsha kwiNgxowa-mali yoMthengi ofanelekileyo ngokusebenzisa intlawulo enikezelwa yi-FXCC kwaye emva koko idlulisele kwiakhawunti yokuthengisa yabathengi efanelekileyo. Uhlengahlengiso lwebhalansi, ukurhoxiswa kwemali esele ikhona kwaye uphinde uyithumele kwakhona, isingeniso / izabelo ezihlangeneyo / izaphulelo zeQabane okanye ikomishini azizukuthathwa njengemali entsha.
200% Ibhonasi yeDistim: Kwidipozithi nganye eQinisekisiweyo eyenziwa ngabaThengi abafanelekileyo kwiiakhawunti zabo zorhwebo nge-FXCC ngexesha lokunyusa Umthengi ofanelekileyo uya kufumana i-200% yediphozithi kwiBhonasi kwisithuba seeyure ezingamashumi amabini anesine (24) zomsebenzi emva kokuba idiphozithi yenziwe. (Idipozithi encinci ixhomekeke kuhlobo lweakhawunti kunye neemeko)
Inani elikhulu lamaBhonasi: I ubuninzi Imali yeeBhonasi ezidityaniswe yiFXCC kunoma yiliphi iKlayenti eliFanelekileyo naliphi na ixesha ayikwazi ukudlula i-$ 10,000 US (okanye ilingana).
I-Client 'A' yenza idiphozitsha entsha ye-$ 1,500 ▶ iKlayenti 'A' iya kufumana ityala lokurhweba i-$ 3,000 njenge-200% i-Deposit Bonus; Le bhonasi iya kubonakalisa kwiakhawunti yeKlayenti ngale ndlela ilandelayo:
Emva koko, i-Client 'A' yenze enye idizithi ye $ 2,000 ▶ Ixhasi 'A' izakufumana ityala lokuthengisa $ 4,000 njenge-200% i-Deposit Bonus
I-Client 'B' yenza idiphozitsha entsha ye-$ 3,000 ▶ I-Client 'B' iya kufumana ityala lokurhweba i-$ 6,000 njenge-200% i-Deposit Bonus. Le bhonasi iya kubonakalisa kwiakhawunti yeKlayenti ngale ndlela ilandelayo:
Emva koko, i-Client 'B' yenze enye idizithi ye-$ 2,500 ▶ I-Client 'B' izakufumana kuphela iibhonasi ze-4,000 kuphela zee-bhonasi ngenxa yokuba umda ophezulu weebhonasi i-$ 10,000 Le bhasasi iya kubonakalisa kwi-akhawunti yeKlayenti ngale ndlela ilandelayo:
I-Bonus iya kufakwa kwi-akhawunti ye-Client ye-Eligible yorhwebo njengetyala, i-Bonus ijoliswe ngenjongo yokurhweba kuphela kwaye ayikwazi ukulahleka.
Ukurhoxiswa kwi-akhawunti yokuthengisa yabathengi efanelekileyo kunye / okanye ugqithiso lwangaphakathi kwiakhawunti yokuthengisa yomthengi efanelekayo iye kwi-Wallet yakhe, iyakwenza iBonus ukuba icinywe ngokuzenzekelayo kwaye isuswe ngokupheleleyo
Umthengi 'C' ucele ukurhoxiswa kwe- $ 1,000 bonus Ifunyenwe ibhonasi iya kucinywa kwaye isuswe ngokupheleleyo.
Umthengi 'C' ucele ukurhoxisa isixa esipheleleyo ($ 2,500) bonus Ifumene ibhonasi eyamkelweyo iza kucinywa kwaye isuswe ngokupheleleyo.
Imali ebuyayoIibhonasi zeBhonasi ziza kuhlala zilungiswe kwaye ziguqulwe zibe yiBhalansi ehoxiswayo ngokukhawuleza emva kokuvala intengiso nganye kungakhathaliseki ubungakanani beshishini kunye nomhlathi (11) apha ngezantsi.
Ukuqhutyelwa kwe-1 ejikelezayo kwinqanaba elijikelezayo liza kudlulisela inani $1.0 (okanye ulingana) ukusuka kwiBhonasi yeNgxowa-mali ukuya kwi-balance balanceable
I-Client 'D' ithengise ukuthengiselana okupheleleyo kwe1 ixabiso elingu-EURUSD elincinci (oko kuvulwe kwaye livaliwe), ngenzuzo ye $ 100 ▶ Oku kufaka oku kubhaliweyo okulandelayo kwimbali yomlando:
I-Bonus Idibanisa i-$ 1.0 ( okt ixabiso lebhonasi liguqulwa libe yimali yangempela kwaye yongezwa kwibhalansi ye-akhawunti). Kwaye kubonakaliswa kwi-akhawunti ibhalansi ngolu hlobo lulandelayo:
Ngethuba lexesha lokufaneleka ukuba i-akhawunti ye-Client's balance balance (kubandakanywa inzuzo kunye nokulahlekelwa) efikelela kwizinga elilinganayo okanye ngaphantsi kwe-30% ye-Credit Bonus (ngamanye amazwi: ubulungisa be-akhawunti bufikelela kwizinga elilinganayo okanye ngaphantsi kwe-130% yeBhonasi ekhoyo imali ekhoyo yeBhonus Credit iya kususwa ngokuzenzekelayo (i-credit out), igcinwe kwi-Akhawunti "yokuLondoloza" eyahlukeneyo kwaye iya kusetyenziselwa ukuvuza uMthengi ofanelekileyo okhankanywe ngasentla malunga nayiphi na imisebenzi eqhubekayo eyenziwa kunye ne-balance balance of that account. umhlathi 10 de kube sekupheleni kwexesha lokufaneleka.
- 30% yeBhonasi ekhoyo (credit) = $ 600
Kucinga ukuba iKlayenti 'D' inorhwebo evulekileyo ye-1 i-EURUSD enkulu ngelahleko ekhoyo ejikelezayo ye-$ 400, oku kuthetha ukuba i-▶ Ukulinganisa + inzuzo ephumayo & ilahleko = $ 1,000 - $ 400 = $ 600
$1,000 $600 $0 Ayikho iMargin yamahhala
Olu nikelo luhlelwe kwaye luqhutywa yiCentral Clearing Ltd, i-Law Partner House, i-Kumul Highway, iPort Vila, iVanuatu kwaye iyafumaneka kubathengi abahlala kwiiJurisdictions ezingezaseYurophu.
Abaxhasi kufuneka baphathe i-akhawunti yabo yokurhweba ehambelanayo neyontengiso yabo yokuthengisa. Ukunikezelwa kokunyusa akuklanyelwe ukutshintshisa okanye ukuguqula ukhetho lwentengo yeklayenti okanye ukukhuthaza abathengi ukuba bathengise ngendlela engahambelani neendlela zokutyalomali zabaxhasi.
Iimveliso zeFXCC zithengiswa kumgama osemgangathweni, ophethe inqanaba eliphezulu lomngcipheko kwaye onokungafaneleki kubo bonke abathengi. Ngaphambi kokugqiba ukuthengisa iintengiso zeFXCC, abaxhamli kufuneka baqwalasele ngenyameko iinjongo zabo zokutshala, inqanaba lamava kunye nesondlo sokutya. Kunokwenzeka ukugcina ukulahleka okungaphezulu kwelokutshalwa kwetyala lokuqala. Abaxhasi akufanele baphambuke kwiindawo zabo zokuthengisa eziqhelekileyo ukuze banelise ubuncinane beemfuno zorhwebo ezibekwe kule Migaqo neMibandela.
Ukungaphumeleli ukuthobela le Migqaliselo neMibandela kuya kubangela ukuba umthengi angafaneleki ukunikezelwa. Nangona kunjalo, ukungaqiniseki akukho mpembelelo kwikhono lomthengi lokuthengisa kwi-platform yezohwebo zakwaFXCC kwaye akukho ndlela ichaza ukuba abathengi banomngcipheko ophezulu okanye ukunyuka kweemarike.
Le Migaqo neMibandela ayibonakalisi yonke ingozi ehambelana nokutyalomali kwimveliso yeFXCC. Abaxhasi mabaqwalasele ngokucokisekileyo isivumelwano seAkhawunti ye-FXCC kunye neNkcazo yokuDalulwa kweNgcipheko ngokubanzi phambi kokugqiba ukuvula i-akhawunti kunye ne-FXCC kwaye ucinge ngeengozi ezichazwe ngokubhekiselele kwiinjongo ezithile zokutshala imali kunye neemeko zezimali ukuze zichonge ukuba ngaba utyalo-mali lufanelekile. Isivumelwano kunye neNgcaciso yengozi iyatholakala kwiwebhusayithi yeFXCC kwi www.fxcc.com
(Inguqulelo 2.1 -Igqityelwe ukuvuselelwa: Epreli 2020)